Sigaarka: Dilaaga Dahsoon! - Machadka Indheergaradka Somaliland
Machadka Indheergaradka Somaliland > Bologa > Joornalka > Warka Bologa > Sigaarka: Dilaaga Dahsoon!
Sigaarcabiddu waxa ay ka mid tahay sababaha ugu horreeya ee geerida keena. Waxaa lagu dooday in saddexdii qof ee sigaar qiijiyaba, hal qof uu u dhinto tubaakada. Sidaas oo ay tahay, weli dadku waa ay ku sii adkaystaan. Waxa inta badan laga hadlaa halisaha duleed ee sigaarka. Kansar, neefsashada oo xumaata, hawada oo dikhawda iyo qodobbada la mid ah. Balse kasmanafeeddu (psychology) waxa ay xoogga saartaa dhan kale oo qodobbadaa dhammaystir u ah; saamaynta nafeed iyo dhimir ee qiijinta sigaarta.
Kasmanafeeddu waxa ay sharraxdaa sababta qofku sigaarka, iyo wax kastaba, ula qabsado (i.e. balwad u yeesho). Hoormoonka Depomine (oo lagu naanayso “hoormoonka farxadda”) ayaa la sii daayaa marka qofku uu adeegsanayo waxan uu la qabsaday, dabadeedna waxa uu ka helayaa farxad aan yarayn iyo riyaaq sarreeya. Riyaaqiddaasi marka ay halka u sarraysa gaadho, waxa qofku galaa khiyaal loo bixiyo mirqaan (euphoria). Balse daroogooyinka qaar, sida Nikotiinta (nicotine) sigaarka ku jirta, ma aha kuwo mirqaan keena; taa beddelkeeda waxa ay qofka ugu deeqaan riyaaqid qab iyo illawsiin ah. Sidaa darteed, qofku ma jari karo. Haddii si qasab ah looga jaro, ama uu u waayana, waxa ku dhaca badhgo’ (withdrawal symptoms). Qofka ku mama (drug abuse) isagana waxa soo rita xanuunno nafseed iyo kuwo duleedba.
Haddaba, akhristoow haddii aad sigaarcabidda badtasid, waxa taladu tahay in aad iska yaraysid heer oo aad iska jartidba. Weligaa ha yeelin in mar keli ah aad goysid balwadda; waayo waxa ku soo ridan doona badhgo’ ka daran balwaddii aad joojisay. Sidaa darteed waxa aad raaci kartaa tallaaboyinkan, oo aan u arko in ay yihiin kuwo shaqayn kara aragti ahaan:
Marka hore waa in aad go’aansataa joojinta sigaarka. Waa in aad qorataa sababaha aad u joojinaysid; haddii aad joojisid waxa aad ka helaysid; iyo haddii aad sii waddid waxa aad ku waayaysid.
Ka soo qaad in maalintii (24-ka saacadood) aad baakidh (20 xabbo) sigaar ah kaga saartay. Waxa aad qorshaysaa, adiga oo kaashanaya baaniye/baaniso (counsellor), in aad muddo bil ah waddid toban xabbo oo sigaar ah maalintii (kala badh intii aad qiijin jirtay). Caado in la jaro, oo mid kale la hirgeliyo, waxa ku filan muddo bil ah. Sababtaas ayaa aynu u doorannay.
Bisha labaad, waxa aad ku adkaysataa in aad shan xabbo maalintii ka dhigtid.
Bisha saddexaad, 2 xabbo ka dhig, adiga oo ku darsanaya, haddii aad helaysid, hal xabbo oo xanjada nikotiinta leh (waayo sababta aad sigaarka ugu mamtayba waa in nikotiintaasi ku jirto). Haddii aad xanjadaa weydid, labadii cishaba shan xabbo oo sigaar ah ka dhigo.
Bisha afraad, waxa aad ka dhigataa hal xabbo oo sigaar ah iyo hal xabbo oo xanjadii ah maalintiiba. Haddii aad xanjada weydidna, labadii maalmoodba saddex xabbo oo sigaar ah ku wad.
Bisha shanaad, waxa aad ka dhigataa hal xanjo oo nikotiin leh maalintiiba.
Bisha lixaad, xanjada nikotiinta leh ku beddelo xanjo hah leh oo aan nikotiin iyo daroogo kale toona lahayn.
Hadda wixii ka danbeeya, baahi uma qabtid xanjo iyo sigaar toona. Keli ah waa in aad ka dheeraataa asxaabta sigaarcabka ah ee aad la socon jirtay haddii aanad iyagana soo hanuunin karin!
Kaasi waa qofka raba in uu sigaarka iska jaro. Haddaba haddii aad tahay qof aan rabin in uu iska gooyo balwaddiisa, waxa aad u beddelataa sigaarka elegtaroonigga ah (eCigarette). Haddii aad weydo kaas, ama aanad iskaa u rabinna, talooyinka weelee
Iska cab sigaarkaaga, balse ha ku qiijin meelaha dadku isugu yimaaddaan; sida cisbitaallada, gaadiidka dadweyna, dugsiyada iyo suuqyada cidhiidhiga ah.
Sigaarka marka aad qiijinaysid, gacanta aad ku qabanaysid galoofisyo gasho. Waayo labada farood ee sigaarka la dhexgeliyo waxa ku samaysma haaro iyo isbeddelid duleed, oo aan u wacnayn caafimaadka gacmahaaga. Haddii aad galoofyada ka dhega-adaygto, ama aad weydaba, gacanta bidix ku qabso
Marka aad sigaarka nuugaysid, dabayl-ka-jeedka u jeeso oo ha eegin dhanka dabayl-u-jeedka. Waxa aan ka wadaa, dhanka dabayshu u dhacayso la raac, si aad uga hortegtid in qiiqu kugu soo noqdo.
Meel hawadeedu furan tahay, doono.
Marka aad sigaarka qabsatid, dhanka gubanayaa yaanu kor soo eegin ee hoos ha eego. Waxa aan ka wadaa, hoos u foofari marka aad qiijinaysid si aanu danbaskiisu kuugu soo daadan.
Kala dheeroow sigaarka goobaha ay ka dhaw yihiin ubadku; siiba ubadka aad mas’uulka ka tahay, sida carruurtaada ama/iyo ardaydaada. Waayo ubadku waxa ay u nugul yihiin in ay dheegtaan dhaqannada dadka ka waaweyn, siiba kuwa mas’uulka ka ah.
Haddii aad tahay nin xaas ah, ooridaaduna uur leedahay, kala dheeroow goobta ay ka dhaw dahay. Waayo waxa ay nikotiinku u gudbi kartaa jidhka haweenayda, oo ay saamiqaybsi wada leeyihiin jidhka ilmaha uurka ku jira.
Haddii aad haweenay uur leh, ama naasnuujintii wadda tahay, iska ilaali in aad sigaarka qiijisid xilligaa aad uurka leedahay, ama aad ilmahaaga naaska nuujinaysid. Waayo marka uu ilmuhu uurka ku jiro, haddii ay wax iska beddelaan jidhkaagii oo nikotiinku saameeyo, waxa kugu abuurmaya qulub iyo werwer u gudbi kara ilmahaaga; oo sababi kara in uu dhasho ilme aan dhammays ahayni (malformed). Haddii aad naasnuujinta waddidna, caanaha ayaad ugu gudbinaysaa ilmihii nikotiin, dabadeedna difaacii jidhka ee ilmaha yar ayaa wax ka dhinmayaan, qof sacsac ahna wuu soo baxayaa.
Akhristoow, haddii aanad sigaarka qiijin, hambalyo! Waxa keli ah ku saaran in aad ka dheeraatid goobaha sigaarka lagu qiijiyo, waayo sigaarcabbaha dahsoon (ee qaadanaya qiiqa) ayaa ka nugul kan sigaarka cabbaya. Talooyinkanina adiga toos kuuma khuseeyaan. Balse haddii aad garanaysid cid la ildaran nikotiintaa, fadlan u gudbi oo wacyigelinta qayb ka qaado. Haddii aad tahay, ama aad garanaysid, qof sigaarcabbidda iska daayay, fadlan ila soo xidhiidh si aynu u ururinno tallaabooyinka iyo talooyinka aad u ayday ee ku anfacay.
Disclaimer: Views and opinions expressed are those of the author/authors and do not reflect the views of Somaliland Intellectuals Institute (SII) and/or its sponsors. SII reserves the right to edit articles before publication. If you want to submit an opinion piece or an analysis please email it to webmaster@somalilandintellectualsinstitute.org November 23, 2017
sigaar dilaa qarsoon